टप नेपाली जोक्स – Top Nepali Jokes – Page4– MeroJilla.com
महिलालाई किन वढि यौन इच्छा हुन्छ ? Monday, August 21st, 2017
काठमाडौं । यौन चाहना महिला भन्दा बढी पुरुषमा हुन्छ । यो जन्मजात गुण हो । पुरुषमा हार्माेनहरु उत्तेजित हुने भएकाले यौन उत्तेजना पनि बढी हुने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् ।तर, पुरुषमा यौन क्षमता शरीरमा हर्मोनको गडबडी या कमीका कारण कमजोर हुने समस्या निम्तन सक्छ । हर्मोनको परिवर्तनको कारण पनि पुरुषमा यस्तो समस्या हुन सक्छ । कैयौंपटक हृष्टपृष्ट मानिस पनि नपुंसकता वा यौन क्षमता..
शिक्षक र बिद्यार्थी बिच यौन सम्पर्क वच्चा जन्मेको खुलासा Sunday, August 20th, 2017
काठमाडौं । जन्मेको बच्चा मारेको आशंकामा एक किशोर र एक किशोरीलाई प्रहरीले शुक्रबार पक्राउ गरेको छ। दक्षिणी हतुवागढी गाउँपालिका २, घोडेटारका २८ वर्षीय एक स्थानीय निजी स्कुलका प्रिन्सिपल कृष्ण राई र घोडेटारकै २६ वर्षीया सोही स्कुलकी शिक्षिका रमिता राईलाई भर्खरै जन्मेको नवजात बच्चा मारेको आरोपमा घरैबाटै पक्राउ गरेको हो। शुक्रबार रमिताले बच्चा जन्माएकी थिइन्। स्थानीयले..
राशि अनुसार तँपाई कस्तो व्यक्ति ?
भाद्र,०४ । ज्योतिषमा फल बताउने हजारौं माध्यमहरू छन् । तीमध्ये व्यक्तिको जन्मराशिका आधारमा बताइने फल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । राशिको निर्धारण पनि पाश्चात्य मतअनुसार एक महिनासम्म एउटै राशि मान्ने चलन छ भने हिन्दु ज्योतिषले चन्द्रमाको आधारमा लगभग अढाइ दिनको एक राशि मानेको छ । त्यसैले पाश्चात्यको तुलनामा हिन्दु ज्योतिषमा राशि निर्धारण निकै सूक्ष्मरूपमा गरिएको पाइन्छ ।..
कण्डम नलगाई आन्नदले सुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने कि ? Saturday, August 19th, 2017
यद्यपि यौन सन्तुष्टि भरपूर दिने भन्दै धेरै ब्राण्डका कण्डम नआएका होइनन् तरपनि साधन प्रयोग नगरी गरेको यौनसम्पर्क जस्तो सन्तुष्टि कहाँ हुन्थ्यो र ? तर के गर्नु यौन सन्तुष्टि नपाउादा नपाउादै पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले कण्डमको प्रयोग गर्न धेरै यौनजोडि बाध्य छन् । यदि यौन सुरक्षा पनि हुने र सन्तुष्टि पनि दिने खालको कण्डम भए कति राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने चाहना सायद धेरैको छ ।..
धेरै महिलाहरुलाई कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन ! Sunday, August 13th, 2017
काठमाडौं । जान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । सेफ सेक्सका लागि कण्डम भरपर्दो अस्थायी साधान समेत मानिन्छ । यसले विभिन्न संक्रमणबाट जोगाउन समेत मदत गर्छ । तर, धेरे महिलाहरुलाई कण्डमको प्रयोग गर्न मनपर्दैन । यसका केही कारणहरु रहेका छन् । चरम सुख..
चुट्किला- घर गएर रोमान्स Tuesday, December 13th, 2016
भजन सुनेर आएको शेरेले आफ्नी श्रीमतीलाई काखमा उठायो श्रीमती : भजन सुन्ने क्रममा गरुले घर गएर रोमान्स गर्न भन्नु भएको थियो ? शेरे : होइन्, गुरुले आफ्नो दुःख आफै उठाउनु भनेका थिए त्यसैले तिमीलँई उठाएको हुँ..
स्वास्नी : म गर्भवती छु Monday, December 5th, 2016
स्वास्नी :एउटा कुरा भन्छु नपिट्नु हैलोग्ने :भनस्वास्नी : म गर्भवती छु लोग्ने : खुसीको कुरो किन पिट्नु स्वास्नी :बिहे अगाडि यहि भन्दा बाले..
कृपया चटपटे खाएपछिको कागज एकपटक हेरिदिनु होला । Sunday, September 18th, 2016
कृपया चटपटे खाएपछिको कागज एकपटक हेरिदिनु होला । किन भने ......... लोकमानको फाइल खोज्न सरकारलाई तपाँईको सहयोगको आवस्यकता छ..
पेटिकोट लाएर आईज Wednesday, August 31st, 2016
सेरे ः दाई म तपाईको बिहेमा कुन कोट लाएर आऊ? ताकि सबै जना मलाई नै हेरुन् | टेन्सन ः पेटिकोट लाएर..
कहाँ पुलिसले समात्नु नि आफै समात्नु पर्छ
एक दिन बान्द्रे लाई अति नै पिसाब ले च्यापेछ । र बाटोमा नै मुतिदियछ। त्यो मुतेको देखेर एउटा टुरिस्ट ले बान्द्रे लाई सोधेछ । टुरिस्ट : तपाईंहरुलाई यसरी बाटो मा पिसब गर्दा पुलिस ले समात्दैन ? बान्द्रे : कहाँ पुलिस ले समात्नु नि आफै समात्नु पर्छ..
बैँसमा के के सोच्छन केटा हरु Monday, August 22nd, 2016
राइस कुकर भन्नुभा रैछ म चाँहि बुहारी भनेर..